နိုင်ငံလေးနိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ဝ ကျော်ဖြင့် နိုင်ငံတကာ ရဲတီးဝိုင်း ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံလေးနိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ဝ ကျော်ဖြင့် နိုင်ငံတကာ ရဲတီးဝိုင်း ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပ??
နိုင်ငံတကာရဲတီးဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲ (၂ဝ၁၇)ကို နိုင်ငံပေါင်း လေးနိုင်ငံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ဝ ကျော်ဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က ရန်ကုန်မြိှု့SUMMIT PARK VIEW ဟိုတယ်တွင် နိုင်ငံတကာ ရဲတီးဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲ(၂ဝ၁၇)ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ ဒုတိယသံအမတ်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဆိုပါပွဲကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသည့် The Mainichi Newspaper မှ တာဝန်ရှိသူများက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုးက ယင်းသို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်။ ပထမရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအမှတ် အသားသင်္ကေတကို ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့နဲ့အခြားနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ တွေနဲ့ အနုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှု အတူတကွပူးပေါင်းဖလှယ်ပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုရရှိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုရရှိစေရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သုံးချက်နဲ့ ဒီပွဲကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုးက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးသည် အဓိကအရေးကြီးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စဉ်များတွင် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ဂျပန်အစိုးရ၏ရပ်တည်ချက် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ ဒုတိယသံအမတ်ကြီးက ပြောသည်။
”ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကရပ်တည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက ဆက်ဆံခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်၊ နိုင်ငံ ရေးထိန်းညှိနှိုင်းဖို့အတွက် လုံခြုံ ရေးကအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ ဂျပန်အစိုးရရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီရပ်တည်ချက်က ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး အဓိကတိုးတက်ဖို့က ရန်ကုန်မြို့ တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးက ပထမအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုထဲမှာ လုံခြုံရေးစိတ်မချရရင် စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လုံးဝအ ကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ လုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူး ပေါင်းပြီး ဒီအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာရဲတီးဝိုင်းဖျော် ဖြေပွဲ(၂ဝ၁၇) ပထမနေ့အဖြစ် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှ ၁ဝ နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်မှ ဆာကူရာတာဝါရှေ့ အထိ ချီတက်တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန် ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးနှင့် The Mainichi Newspaper ဥက္ကဋ္ဌတို့က ဖွင့်လှစ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယနေ့အ ဖြစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ရန်ကုန် မြို့ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MCC ခန်းမ တွင် ည ၇ နာရီမှ ၉ နာရီထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီးဝိုင်း၊ တိုကျို မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီးဝိုင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီးဝိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရဲတီးဝိုင်းတို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ၂၇၆ ဦးက ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်သည်။
မန္တလေး ကျောက်စိမ်း ဈေးကွက်တွင် ပုတီးနှင့် အပွင့်လိုင်းတို့ အရောင်းအဝယ် ပုံမှန်အတိုင်းသ??
NCA ပြင်ပတွင် ပြောကြမည့်အစား UNFC အဖွဲ့ဝင်များ NCA အတွင်းဝင်လာပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် တိုင်ပင်စဉ်??
ဂွါအီဒိုကိုထောက်ခံရန် ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ကို အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် တိုက်တွန်း
သက်သေ မလုံလောက်၍ မုဒိမ်းမှုဖြင့် စီရော်နယ်ဒို တရားစွဲခံရမည် မဟုတ်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ် မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင် ဟု??
မြန်မာ့သစ်တောကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂ဝဝ ချေးပေးသွားမည်